Al Shabaab oo weerar royaal celis ah ku qaaday Degmada Mahadeey - Muqdisho Online. Caasimada Muqdisho
HomeWararkaAl Shabaab oo weerar royaal celis ah ku qaaday Degmada Mahadeey
Al Shabaab oo weerar royaal celis ah ku qaaday Degmada Mahadeey
Sida ay sheegayaan wararka ka imaanaya degmadda Jowhar, ugu yaraan labo askari ayaa ku dhimatay weerar Al Shabaab saakay ku qaareey bar Koontarool oo ku taalla degmada Mahaday ee gobolka Shabeellaha dhexe sida uu Mustaqbal u sheegay sarkaal ka tirsam ciidanka milatariga Soomaaliya. Iska hor imaadka oo ku dhawaad 10 daqiiqo socday ayaa sigaar ah uga dhacay deegaanka Buurane oo ka tirsan degmada Mahaday ee gobolka Shabeellaha Dhexe.
“Labo askari oo ka tirsan ciidamada xoogga dalka oo bartaas koontarool ku sugnaa ayaa dhintay, dhankooda khasaaro ayaan gaarsiinay” Sidaa waxa yiri sarkaal ka tirsan Ciidanka Xooga Dalka Soomaaliyeed. Al Shabaab waxaa u suurta gashay in ay la wareegaan barta Koontarool oo ku taalla degmadda Mahaday ee gobolka Shabeellaha hoose.
Waxaa la sheeagayaa in markii dambe ayay isaga baxeen Alshabaab bartaas koontarool, Bartamihii bishii hore ayay dagaalyahano ka tirsan Al shabaab weerar ku qaadeen degmada Mahaday ee gobolka Sh/dhexe iyagoo saacado haystey halkaas. Degmada Mahaddaay oo uu maro wabiga Shabeelle waxa ay dhacdaa koonfur-galbeed gobolka Shabeellada Dhexe waxa ayna qiyaastii 120 KM waqooyiga kaga beegantahay magaalada Muqdisho, ee caasimadda Soomaaliya.